Britain: Madaxdii Kaalinta “Joint Chiefs of Staff” ee Theresa May oo xilalkii iska casilay – Kasmo Newspaper
Britain: Madaxdii Kaalinta “Joint Chiefs of Staff” ee Theresa May oo xilalkii iska casilay
Updated - June 10, 2017 3:37 pm GMT
London (Kasmo), Dhulgariirkii siyasadeed ee xisbiga Conservative-ka ayaa wali soconaya, ka dib guuldarradii doorashooyinkii guud ee Khamiistii, 8da Juun 2017ka.
Nick Timothy iyo Fiona Hill oo ka mid ah kaaliyeyaasha sida aadka ah ugu dhowaa R/Wasaaraha ayaa xilalkoodii iska casilay, iyaga oo muujiyay sida ay uga xumaadeen natiijooyinkii doorashada, isla markaasna dhabarka u ritay mas’uuliyaddii jabka.
Wargaysyada Britain ayaa subaxnimadii horaba qorayay in Xisbiga Muxaafidku cadaadis ku saaray R/Wasaaraha in ay ka takhalusto si ay u bixiyaan qiimaha fashalkii doorashada.
Jabkaas oo ka dhigay Conservative-ka xisbiga 1aad laakiin waayay aqlabiyaddii, lumiyayna kuraas badan marka loo eego Barlamaankii hore, khasabna ku noqotay in uu is-bahaysi muran ka taaganyahay ka raadsado Xisbiga DUP (Democratic Unionist Party) ee Ireland-ta Woqooyi.
Labada kaaliye (Sawirka sare), waxay muddo dheer ka tirsanaayeen Staff-ka Theresa May, tan iyo markii ay Wasiirka Arrimaha Gudaha ahayd, iyaga oo markii dambana ula soo wareegay Downing Street loona magacaabay Madaxda Shaqaalaha Xafiiska R/Wasaaraha.
Xanta wargaysyada qaarkood ku soo baxday maanta ayaa sheegaysa in mar kasta oo 2dan mas’uul ka qaybgalaan fadhiyada Golaha Wasiirrada jawigu uu ahaa mid sumaysan, qaar kalena waxay ku eedeynayaan in ay u diri jireen Wasiirrada e-mailllo qaraar lagana caroodo.
Iyaga ayaa loo saarinayaa qaar ka mid ah qodobbadii lagu daray bayaanka (Manifesto) doorashada ee Xisbiga sida goynta daryeelkii waayeelka, taas iyo kuwo kale oo ay ka dhalatay natiijadii gurracnayd ee doorashada.
Su’aasha warbaahinta iyo Golayaasha siyaasadda wareegaysa waxay tahay: inta ay Theresa May sii joogi karto hadda, jawaabta ugu badanna waxay tahay: wax an badnayn.
Xog-ururin Daily Telegraph baahiyay waxay sheegaysaa in 3 dalool oo 2 xubnaha u diiwaangashan Conservative-ku jeclaan lahaayeen in Theresa May iska tagto hadda, xilkana iska casisho. Warbaahinta waxaa ku jira liiska dadka laga yaabo in ay beddelaan, sida Boris Johnson (W.Arrimaha Dibadda), Michael fallon (W.Gaashaandhigga), Amber Rudd (W.Arrimaha Gudaha) iyo David Davis (Arrimaha Brexit).
Dhanka kale xisbiga DUP ee Ireland-ta Woqooyi (oo 10 kursi oo qur ah haysta) ayaa, galinkii dambe ee maanta, heshiis la galay Muxaafidka, si loo helo kalsooni dhismaha xikuumad cusub oo Theresa May hoggaaminayso.
Hoggaamiyaha Kooxda Conservative-ka, Gavin Williamson ayaa uga dhaqaaqay Belfast, gabagabadii kulan wada-xaajood ahaa oo maalin idil socday, tafaasiishana, sida laga xaqiijiyay Downing Street, waxaa lagu qeexi doonaa Isniinta, kulanka u horreeya ee Xukuumadda.